I-Swaarm: Shintsha, Shintsha, futhi Kala Ukusebenza Kwakho Kokukhangisa | Martech Zone
I-Swaarm: Shintsha, Shintsha, futhi Kala Ukusebenza Kwakho Kokukhangisa
NgoLwesihlanu, Okthoba 16, 2020 NgoLwesihlanu, Okthoba 16, 2020 Douglas Karr
Swaarm yipulatifomu yokulandela ngomkhondo esekwe ekusebenzeni enikezela ama-ejensi, abakhangisi, namanethiwekhi amandla okulandela ngokugcwele nokulawula imizamo yabo yokumaketha ngesikhathi sangempela ukuqinisekisa ukukhula okunenzuzo.
Ipulatifomu yenziwe kusukela phansi kuze kube lula ukuyisebenzisa, kepha inamandla, nge-automation yomkhankaso oqhutshwa yidatha ukusiza abathengisi ukukala ngempumelelo nokwandisa imikhankaso ngentengo yezomnotho.
Esikhundleni sendlela ephezulu, sakhe lo mkhiqizo phansi. Zisuka nje, saqala ukuhlola namakhasimende wangempela ukwenza isenzo ngasinye sibe lula, sisheshe, futhi sibe ngcono. Njenge-iOS ne-Android kumafoni ethu, sifisa ukuba yi-Operating System of Performance Marketing.
U-Yogeeta Chainani, umsunguli obambisene no-CPO weSwaarm
Ivula inani ledatha, Swaarm yisixazululo esihlanganisiwe, lapho inkampani ihlose ukuxazulula ezinye zezinkinga ezinkulu embonini yokwengeza amabhizinisi. Ngenkathi ukunikezwa kwamakethe manje kunikeza kuphela imininingwane elinganiselwe yedatha, kusadinga izinqubo ezinkulu zomsebenzi wezandla, futhi kuza namamodeli entengo angasebenzi kahle, iSwaarm yakhelwe ukunqoba la maphuzu obuhlungu. Ipulatifomu ivumela izinkampani ukuthi zenze izinqumo eziqhutshwa yidatha futhi zikala ibhizinisi labo ngenani lentengo elingcono ngokunikela ngezinga eliphakeme lokuzenzekelayo.
Sinciphise izindleko zethu zokulandela umkhondo zaba ingxenye eyodwa kwezintathu ngokuthuthela eSwaarm. Ngasikhathi sinye, amathuluzi wokuzenzekelayo asisize ukuthi sinyuse ukusebenza kwethu kahle okuholele ekukhushulweni kwemali engu-20%. ”
UThorsten Russ, uMqondisi Ophethe, i-Evvolution
Izici Zokumaketha Kokusebenza Kwe-Swaarm Faka
Swaarm Inakekela izidingo zabo bobabili abathengisi abangakwazi ukuzulazula ngamathani wedatha ngokuchofoza okumbalwa kanye namabhizinisi azi-data-savvy angasebenzisa amathuluzi wesayensi edidiyelwe ukuze angene ngokujulile ezimbobumbeni.
Isikhombimsebenzisi sozakwethu - Ivumela abalingani ukubona izinombolo zokulandelela nezemali ngesikhathi sangempela.
Smart Links - Ukunikeza abashicileli be-CPM isikhangiso esifanele somsebenzisi ofanele, ngokususelwa kuma-algorithms wokufunda wemishini esezingeni eliphakeme.
Ukukhokhisa nokuhlanganisa - Hlanganisa izinombolo zakho zanyanga zonke nezinombolo zomlingani wakho ukuze ukhokhise kahle nangokushesha.
Ukuvumelanisa Kwenethiwekhi Nokungenisa Okuzenzakalelayo - Ngenisa ngokuzenzakalela futhi usethe ukunikezwa kusuka kunani elikhulu labalingani.
Ukusebenziswa kwe-CR Kwangempela Kwesikhathi - Thatha isinyathelo ngokuzenzakalela ngokusekelwe kudatha yesikhathi sangempela yokwandisa ithrafikhi.
Ukukhomba Okuthuthukile - Ukuvinjelwa kwesikhathi sangempela kwe-geo, amadivayisi, uhlobo lwethrafikhi, abathwali, noma iyiphi enye idatha yangokwezifiso.
Ukubikwa Kwemininingwane - Thola amaphethini, izitayela, namathuba ebhizinisi kwimininingwane yakho, yabelana ngayo nozakwenu.
Ukuskena Kwesixhumanisi Sokulandelela se-24/7 - Khomba ukuthi ngabe isixhumanisi sokulandela silungile kukho konke ukunikezwa kusistimu yakho.
Vakashela i-Swaarm ukuthola eminye imininingwane
Tags: ukusebenza kwesikhangisoipulatifomu yokulandela umkhangisoukunamathelaukukhangisa kwedijithaliukumaketha kokusebenzaipulatifomu yokukhangisa yokusebenzai-swaarm
I-RudderStack: Zakhele Ipulatifomu Yedatha Yekhasimende Lakho (CDP)
I-Elementor: Isihleli Esihle Sokuklama Amakhasi amahle we-WordPress nokuthunyelwe